सम्झनाले खुट्टाद्वारा परीक्षा दिँदै » खबरहरुको एउटै केन्द्र
सम्झनाले खुट्टाद्वारा परीक्षा दिँदै
शनिबार, चैत्र ५, २०७३ ०८:२४ मा प्रकाशित !
५ चैत, खोटाङ। दुबै हात नभएकी खोटेहाङ गाउँपालिका– २ की सम्झना राई खुट्टाले लेखेर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दीरहेकी छिन । भगवती दिनानाथ मावि खोटाङबजारमा कक्षा–१० सम्म अध्ययन गरेकी सम्झनाले सिम्पानी मावि केन्द्रबाट परीक्षा दीरहेकी छिन ।
शारीरिक रुपमा अशक्त सम्झनाले खुट्टाले लेखेरै भए पनि समयमै सबै प्रश्नको उत्तर लेख्ने गरेको केन्द्राध्यक्ष राजन ढकालले बताए। १७ वर्षीया सम्झना इन्द्रेणीपोखरीस्थित मावली बसेर भगवती दिनानाथ माविमा अध्ययन गरेकी हुन । भगवती दिनानाथ माविका प्रधानाध्यापक कुमार पराजुलीका अनुसार उनी विद्यालयको जेहेन्दार र अनुशासित विद्यार्थीमा पर्छिन ।
परीक्षा केन्द्र नजिकै सिम्पानीबजारमा कोठा भाडा लिएर परीक्षा दीरहेकी सम्झनालाई सघाउन उनकी आमा सुमित्राले साथ दीइएको छ । “आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले मावली बसाएर पढाइयौं ।” आमा सावित्राले भने ।
सम्झनालाई अहिलेसम्म अध्ययनमा लागेको सबै खर्च विद्यालयको तर्फबाट व्यहोरिएको प्रअ पराजुलीले जानकारी दिए । जन्मजात दुबै हात नभएकी सम्झनालाई अध्ययन तथा सहज जीवनयापनका लागि यसअघि खोटाङ सेवा समाज बेलायतबाट रु चार लाख ६९ हजार ७६० आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो ।
समाजले उपलब्ध गराएको रकम उच्च शिक्षा अध्ययनमा खर्च गरिने आमा सुमित्राले बताए ।गरिब परिवारमा जन्मिएकी सम्झनाले आफू अशक्त भए पनि पढेर समाजको सेवा गर्नमा आफ्नो जीवन बेतित गर्ने बताए ।
PREVIOUS POST Previous post: राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसको अस्तित्व सङ्कटमा
NEXT POST Next post: आयोगको निर्णय विरुद्ध राप्रपाले संवैधानिक उपचार खोज्ने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, चैत्र ५, २०७३ ०८:२४
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, चैत्र ५, २०७३ ०८:२४
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, चैत्र ५, २०७३ ०८:२४
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, चैत्र ५, २०७३ ०८:२४
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, चैत्र ५, २०७३ ०८:२४